Telegram vs WhatsApp: keebaa fiican? | Madasha Mobile
Eder Ferreno | 20/10/2021 16:00 | Shabakadaha Bulshada, telegraam
WhatsApp vs Telegram. Tani waa mid ka mid ah isbarbardhigga ugu badan ama dagaalada u dhexeeya adeegsadayaasha Android iyo iOS. Labadan codsi ee farriimaha ayaa suurtogal ah inay yihiin kuwa ugu caansan uguna caansan suuqa, malaayiin isticmaalena mid walba. Markaad dooranayso mid ka mid ah barnaamijyadan, adeegsadayaal badan ayaa raba inay ogaadaan midka ugu wanaagsan.
Hoos waxaan kuugu sheegi doonnaa wax badan oo ku saabsan labadan arji ee farriimaha, si aad u ogaato midka wanaagsan. Waxaa jira dhinacyo gaar ah oo gacan ka geysato sidii loo ogaan lahaa kan wanaagsan, dagaalkaan WhatsApp vs Telegram, laakiin xaalado badan waxay sidoo kale ku xirnaan doontaa waxa mid walba uu ka raadiyo barnaamijyadan si loo doorto midka ugu fiican.
1 Asturnaanta iyo amniga
2 Hawlaha sheekaysiga
3 Wicitaanada iyo wicitaanada fiidiyaha
4 Taageerada qaab-dhismeedka badan
5 Shakhsi ahaaneed
6 WhatsApp vs Telegram: oo ah barnaamijka farriinta ugu fiican
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee isbarbardhiggaan WhatsApp -ka Telegram waa asturnaanta iyo amniga. Labada arji leeyihiin qarsoodi dhamaadka-ilaa-dhammaad ee sheekaysiga. Marka laga hadlayo WhatsApp waa wax ku jira wada sheekaysiga oo dhan, halka Telegram-ka ay tahay wax laga heli karo oo keliya wada sheekaysiga qarsoodiga ah, wada sheekaysiga caadiga ah waa mid sir ah, kaliya ma aha ilaa dhammaad. Dhab ahaantii, sheekaysiga qarsoodiga ahi waa mid ka mid ah furayaasha qaybtan.
Telegram wuxuu ku darayaa lakab dheeri ah oo amniga iyo asturnaanta wada sheekaysigaan qarsoodiga ah. Wada sheekaysigaan dhexdiisa ah ma oggola shaashadaha, sidaa darteed wax kasta oo lagu sheegay sheekadaas waxay ku sii jiraan sheekadaas. Intaa waxaa dheer, kiiboodhka ayaa sidoo kale lagu hawlgeliyaa hab qarsoodi ah, si aan talooyin loo soo saarin ama wixii la qoray la keydiyo. Mid ka mid ah astaamaha xiddiglaha ee sheekadan qarsoodiga ah ayaa ah inay iyagu is-halleeyaan. Waxaan dooran karnaa inta ay qaadanayso in farriimaha la tirtiro. Markaa wax walba waa la tirtiray oo cidna ma heli karto farriimahaas.
WhatsApp iyo Telegram labaduba waa oggol yihiin qufulka sheekaysiga adoo adeegsanaya furaha sirta ama faraha, hab kale oo lagu ilaaliyo sheekaysigaaga. Intaa waxaa dheer, marka laga hadlayo Telegram waxaad u adeegsan kartaa app -ka lambar lambar la'aan, wax aan mar hore ku tusnay. Markaa waa hab kale oo arjiga loogu adeegsado si gaar ah mar walba. WhatsApp waa app uu koontadu la xiriirto lambarka taleefanka waxaadna la hadli kartaa oo keliya dadka ku kaydsan buuggaaga taleefanka. Guud ahaan, Telegram -ka ayaa ah midka na siiya xulashooyin badan oo asturnaan ah, taasoo ka dhigaysa mid dhammaystiran.
Qeybta labaad ee WhatsApp vs Telegram waxaa loola jeedaa sheekaysiga laftooda. Labada xaaladoodba waxaan helnaa laba barnaamij oo fariin ah, taasi waxay na siisaa shaqooyin isku mid ah sheekaysiga. Waxa suurtogal ah in la yeesho wada sheekaysiga shaqsi iyo koox iyo dirista farriimaha qoraalka labadaba. Intaa waxaa dheer, labaduba waxay haystaan ​​taageero dirista qoraalo maqal ah waana samayn karnaa wicitaanada iyo wicitaanada fiidiyaha labadaba (shaqsi ahaan iyo koox ahaan).
Telegram wuxuu ka dhigay istiikarada mid ka mid ah astaamihiisa, oo leh baakado badan oo dhejisyo karti leh la heli karo. Tani waa wax ay WhatsApp sidoo kale soo guurisay oo aan aad iyo aad ugu aragno app-ka uu leeyahay Facebook. Labaduba waxay noo oggolaadaan inaan sidoo kale dirno emojis caadi ah, iyo sidoo kale GIFS. Xiriirinta dirista ayaa u shaqeysa si la mid ah labadoodaba waxaan ku arki karnaa fiidyowyo qaab PiP ah.
Markay timaado dirista faylasha, Telegram waa barnaamij na siiya xulashooyin badan. Appku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dirto faylal waaweyn, ilaa 2GB oo culeys ah. Tani waxay ka dhigaysaa barnaamijka mid ku habboon haddii ay tahay inaan dirno fiidiyowyo ama sawirro qaab RAW ah, tusaale ahaan. Intaa waxaa dheer, app -ka waxaan ku leenahay wada sheekaysiga Fariimaha La Keenay, oo aan u adeegsan karno ajandeheenna ama goob xusuus qor ama si fudud aan u keydiso sawirro aanan doonayn inaan luminno.
Wicitaanada iyo wicitaanada fiidiyaha
Labada codsiba waxay taageeraan wicitaanada codka iyo wicitaanada fiidiyaha, labadaba iyo koox ahaan. WhatsApp ayaa noo saamaxaya Wicitaanada fiidiyaha kooxeed ee wadarta ilaa sideed ka -qaybgale. Haddii aad rabto inaad mid ka dhigto dad badan, waxaan adeegsan karnaa Qolalka Messenger, oo lagu dhex dari karo barnaamijka. Laakiin maahan wax asal u ah dalabka laftiisa, sidaa darteed adeegsadayaal badan waa wax loo arki karo xaddidnaan.
Telegram wuxuu soo bandhigay wicitaanka fiidiyaha sanadkii hore, muuqaal ah in adeegsadayaashu ay sugayeen muddo dheer iyagoo xiiseynaya. Markii hore wicitaanada fiidiyahaan waxay ku koobnaayeen oo keliya kuwa shaqsiga ah, laakiin dhowr bilood ayaa ugu dambayntii la taageeray wicitaannada fiidiyowga kooxda. Intaa waxaa dheer, dalabka ayaa dhaaftay WhatsApp tirada ka -qaybgalayaasha, iyada oo taageero laga helayo wicitaanada fiidiyaha ee ilaa 30 ka -qaybgale. Waxaad yeelan kartaa wax intaa ka badan, laakiin haddii ay sidaa tahay waxay noqon doontaa uun wada sheekeysi cod, kamarad la'aan.
In kasta oo ay ku qaadatay waqti dheer inay yimaadaan, isbarbardhiggan WhatsApp vs Telegram waxay umuuqataa inay tahay kii labaad ee yaqaan sida loo sameeyo si ka wanaagsan. Waxay na siinaysaa wicitaano fiidyow oo taageero loogu fidinayo dad badan, wax ka dhiga kooxo kooxo saaxiibo waaweyn ah ayaa isticmaali kara. Ka sokow inaad awood u leedahay in lagu isticmaalo goob waxbarasho ama goob shaqo, marka ay tahay inaad ka hadasho wax koox ahaan, tusaale ahaan.
Taageerada qaab-dhismeedka badan
WhatsApp iyo Telegram labadaba waxaa lagu isticmaali karaa kombiyuutarka, waana wax shaki la'aan iyaga gaar ahaan raaxo ka dhiga. Inkastoo qaabka ay u shaqeeyaan ay kala duwan yihiin. WhatsApp wuxuu ku leeyahay nooca biraawsarka, wac WhatsApp Web. Laga bilaabo maanta, iyadoo la sugayo bilaabista taageerada dhinacyada badan ee imaan doonta, noocaan ku jira biraawsarka wuxuu ku xiran yahay taleefanka. Marka ugu horeysa ee aan soo galno waa inaan iskaan galnaa QR code. Intaa waxaa dheer, markaan dooneyno inaan isticmaalno Web -ka WhatsApp waa inaan hubinnaa in taleefanku leeyahay Internet, haddii kale suurtagal ma ahan in la isticmaalo app -ka.
Telegram wuxuu kaloo noo oggolaanayaa inaan ku isticmaalno kombuyuutarka, inkasta oo kiiskaaga ay tahay iyada oo loo marayo app. Waxaan u soo dejisan karnaa nooca Telegram ee kombiyuutarkeenna (la jaan qaada Windows ama Mac). Codsigan waxaan ku awoodi doonnaa inaan ku galno isla koontada aan ku haysanno mobiilkeenna, sidaas darteedna aan isku xirno labadaba si fudud. Waxaan ku adeegsan karnaa PC -ga annaga oo aan ku xirnayn midka aan ku haysano moobilka. Markaa waan wada sheekaysan karnaa markasta oo aan rabno nuqulkan, xitaa haddii aan illownay moobiilkeenna guriga ama shaqada, tusaale ahaan.
Xaqiiqda ah in nooca desktop -ku uusan ku xirnayn taleefanka waa wax aad u raaxo badan, taasi waxay siinaysaa xorriyad badan isticmaalaha. Markaa qaybtan isbarbar -dhiggan WhatsApp vs Telegram, mar labaad waa tii labaad ee qaata qodobka. In kasta oo tani ay tahay wax hubaal ah inay wax ka beddeli doonto ama u hagaajin doonto WhatsApp marka ay ugu dambayn bilaabaan taageeradooda aaladda badan ee cusub, taas oo u oggolaan doonta noocaan kombiyuutarka inuusan ku xirnayn mobilada. Tani waa wax dadka isticmaala ay sugayeen muddo dheer.
Shaqsiyeynta waa dhinac kale oo lagu xisaabtamayo isbarbardhiggan WhatsApp vs Telegram. Isticmaalayaasha Android iyo macruufka waxay qiimeeyaan inay awoodaan inay habayn karaan dhinacyo kala duwan oo barnaamijka ah. Telegram wuxuu na siiyaa fursado badan oo ku saabsan arrintan, maadaama aan awoodno soo dejiso mawduucyada si aad u beddesho muuqaalka guud ee arjiga. Intaa waxaa dheer, xulashada mawduucyada aan soo dejisan karno waa mid aad u ballaaran, sidaa darteed waxaad had iyo jeer dooran kartaa mowduuc ku habboon dhadhankaaga mar walba.
Waxaan sidoo kale habayn karnaa muuqaalka wada sheekaysiga, annagoo dooranayna lacagaha aan rabno inaan ku helno. Tani waa wax aan sidoo kale ku samayn karno WhatsApp, kaas oo in muddo ah haystay xulashooyin taxane ah oo lagu beddeli karo asalka wada sheekaysiga barnaamijka. Waxay ku saabsan tahay midabyo adag, sidaa darteed gabi ahaanba maahan kacaan, laakiin ugu yaraan waa qaab shaqsiyeed aan ku adeegsan karno mobilada.
Labada dalabba waxay leeyihiin taageero hab mugdi ah, wax run ahaantii muhiim u ah Android. Markaa haddii tani ay tahay wax ku walwal gelinaya, maxaa yeelay adiga ayaa sidaas kuugu raaxaysanaysa inaad ku adeegsato app -ka moobilkaaga, labada arjiba waa suurtogal. Guud ahaan, waxaan arki karnaa inay tahay Telegram oo na siisa xulashooyin is -habeyn oo dheeri ah, sidaa darteed qodobkan waa la qaatay.
WhatsApp vs Telegram: oo ah barnaamijka farriinta ugu fiican
Haddii aad tiriso inta u dhaxaysa qaybaha kala duwan ee aan ku soo sheegnay maqaalkan, waad arki kartaa taas Waa Telegram oo u taagan sida ugu wanaagsan ee farriinta farriimaha marka la barbardhigo. Xaqiiqdu waxay tahay in dagaalkan WhatsApp vs Telegram, uu yahay barnaamijka farriinta ugu wanaagsan ee Ruushka. Waxay na siisaa ikhtiyaarro dheeri ah sheekadeeda, waa mid aad loo habeyn karo, waa barnaamij aamin ah oo gaar loo leeyahay waxayna leedahay nooc desktop ah oo aan ku xirnayn barnaamijka moobiilka, wax shaki la'aan ka dhigaya mid si gaar ah raaxo u leh in la isticmaalo.
WhatsApp waa gacmaha hoos u dhigay app fariin ugu caansan adduunka oo dhan, laakiin wuxuu arkaa in Telegram -ku sii kordhayo. Dhacdooyinkiisa ayaa Telegram ka dhiga malaayiin isticmaale. Intaa waxaa dheer, dhaliilaha badan ee siyaasadaha asturnaanta ee ka baxsan Midowga Yurub waxay sababeen inay lumiso dadka isticmaala. Sidaa darteed, in kasta oo xaqiiqda ah in hadda ay tahay appka adeegsadayaasha ugu badan, wax yar ka dib waxaan aragnaa sida Telegram -ku suuqa ugu sii xoogaysanayo oo uu isu xoojinayo inuu yahay beddelka ugu fiican WhatsApp.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » telegraam » Telegram vs WhatsApp: keebaa fiican?
Sida loo dhigo erayga sirta ah ee faylasha Windows 11
Sida loo isticmaalo oo loogu daro isticmaaleyaasha Telegram iyadoon lahayn lambar taleefan